पुरुष एकल नहुने , महिला मात्र एकल कसरी हुन्छ? सरू सुनार। – Complete Nepali News Portal
पुरुष एकल नहुने , महिला मात्र एकल कसरी हुन्छ? सरू सुनार।
ScotNepal June 25, 2019
इतिहासलाई केल्याउँदा श्रीमान् मरेपछि जिउँदै चितामा जल्नु पर्ने डरलाग्दो सती प्रथालाई वि।स। १९७७ सालमा चन्द्र समशेरले अन्त्य त गरिदिए । तर नेपाली समाजमा त्यसका अवशेषहरू अझैं जीवित छन् ।
श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमतीले आफूले लगाएको रातो कपडा, सिन्दूर, चुरा, पोते सबै त्याग्नु । सेता पहिरनमा जीवन बिताउँनु । शाकाहारी हुनु । पुनर्विवाह नगर्नु यसैका उदाहरण हुन् ।
त्यसैले आजका दिनमा श्रीमान् गुमाउने महिलाहरूले उसको लाशसँगै जिउँदै जल्नु त पर्दैन, तर बाँचुञ्जेल स्वतन्त्रतापूर्वक र सम्मानि भएर बाँच्न पनि पाउँदिनन् ।
जीवनभर श्रीमान टोकुवाको आरोप सहन बाध्य हुन्छिन् ।
अहिलेका सबै विधुवा महिलाहरूले सेतै मात्र लगाउँदैनन् । तर अधिकांशले रातो अर्थात शौभाग्यको रङ्ग पनि त लगाउँदैनन् । कतिपयले सामान्यतयाः रातो कपडा, टीका, चुरा लगाउन त थाले । तर त्यस्ता महिलाको गाउँ समाजमा उछ्टिटो काटिन्छ ।
कुनै पुरुषैलाई प्रभावित गर्न यस्तो उत्ताउली भएकी भन्ने आरोप लगाइन्छ । अथवा सज्जनै भए पनि उसको चरित्रमाथि विश्वास गरिदैन ।
श्रीमान् मरेपछि फेरि अर्को विवाह गर्न पाउने, गर्ने या गरिदिने कुरालाई कथित धर्मसित जोडेर पाप हुन्छ भनिन्छ । तर यसैको उल्टो कुनै पनि पुरुषले एकल जीवन बिताउनु पर्छ भनेर समाज उकास्दैन ।
अर्थात उसले श्रीमती टोकुवाको आरोप सहनु पर्दैन । बरु ‘मर्दकी १० वटी’ भन्दै पुनर्विवाहका लागि तयारी हुन्छ । समाजले किरियामै छँदा उसका लागि नयाँ श्रीमतीको खोजी गर्छ ।
जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि, महिला समानताका भाषण गरे पनि घरमा आमा बुबाको रोजाइको बुहारी कन्या ९कसैसँग यौन सम्बन्ध नगरेकी० र पढेकी नै हुन्छ । अनि जीवन साथी रोज्ने रोजाइ पनि त्यस्तै हुन्छ ।
बरु अहिले पनि एकल महिला भनेपछि बिचरा, कठै, ओहो कस्तो दुख !यस्तै यस्तै सब्दले सहानुभूति दिन्छन् मान्छेहरू ।
एकल महिलालाई बोक्सी देख्ने आँखाहरूको पट्टी अब खोलिनु पर्छ ।
ती नारीसँग धेरै पीडा छ, जुन नारी आफ्नो सहारा गुमाएर, सहाराबिना नै बाँचेकी छिन् । उनलाई आफन्तको सरक्षणको जरुरी हुन्छ ।
नारी होस् या पुरुष जन्मदा एक्लै जन्मने हो ।
जन्मको आधारमा म एक्लो हो ।
तर कर्म र सामाजिक संस्कारले, परम्पराले कुनै नारीको पहिरन, स्वतन्त्रता, अधिकार हनन् गर्न पाइदैन, मिल्दैन र हुँदैन ।
मैले जीवनको डेढ दशक एक्लै बिताएँ । आजसम्म मैले आफूलाइ एकल कहिले सम्झिन । म कोही भन्दा कम छैन । श्रीमान् नभएका कारण मेरा कुनै पनि काम अधुरा छैनन् । मैले चाहेका सबै काम फत्ते गरिरहन्छु । अनि मलाई एकल हुँ भन्ने सोच्न र भन्न कि